Blog-Tipping: PGA-Xaraashyada | Martech Zone
Sabtida, Juun 7, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Tom wuxuu iga codsaday inaan tabo bartiisa, Xaraashka PGA. Aniguna waan ku faraxsanahay inaan ku khasbanaado! Tom's blog wuxuu ku saabsan yahay ganacsigiisa eBay isagana il gaar ah ayuu ku hayaa xaraashka sidaa darteed waxaa jira tartamayaal badan oo halkaas jooga waxaanan u baahanahay inaan xoogaa caawimaad ah ka helno!
Marka hore, hubi inaad saxdo iskuxiraha Ku dhaji xiriiriyaha dib ugu noqo boggeygaMarkii aad nuqul ka sameysatid oo aad ka dhajisid HTML-ka gadaal koodhka, mararka qaarkood way qastaa xigashooyinka. Waan cusbooneysiiyay boostada asalka ah oo leh textarea… Hada hadaad si toos ah nuqul uga sameysatid, way shaqeyn doontaa.
Sababo nabadgelyo awgood kor u qaad WordPress kii ugu dambeeyay uguna weynaa sii daayo. Waxaan ka akhriyay bartaada internetka inaad ku dhex dhacday qaar ka mid ah dhibaatooyinka cusboonaysiinta. Arintaasi wali ma jirtaa? Nooca 2.0 wuxuu hadda marayaa 2.0.10 haddii aadan u cusbooneysiin karin 2.21.
Mashiinnada raadinta waxay u baahan yihiin inay ogaadaan sida looga ag wareego bartaada. Tani waxay si hufan ugu sameeyaan dhowr qalab. Qalabka ugu horreeya waa faylka robots.txt. Waxay si fudud u tahay feyl qoraal ah oo gurguuraha u akhriyo si uu u ogaado meesha uu ka raadinayo iyo meesha aanu ka eegin bartaada. Waad sameyn kartaa feylka adoo adeegsanaya Notepad ka dibna FTP'ing ugu soo dhigaya server-kaaga oo aad ku ridi karto galka shabakadda.
Wakiilka isticmaalaha: * U diid: / wordpress / wp- Khariidadda bogga: http://www.pga-auctions.com/wordpress/sitemap.xml
Qaabka xiga ee Mashiinnada Raadintu ugu wareegaan bartaada waa iyada oo loo maro a Khariidadda bogga. Waxaan si gaar ah u jeclahay 3.0b7 Qalabka Google Sitemap. Xitaa waan ka beddelay si aan ugu gudbiyo Yahoo! sidoo kale wuxuu u diray qoraaga qoraaga laakiin kuma uusan dhisin sii deynta xigta wali. Kani wuxuu dhisi doonaa khariidad-bogga.
Hadda - waxay helaysaa wax yar oo khiyaano ah tan iyo markii aad heshay degel websaydh ah iyo blog WordPress. Ma ogaan kartid, laakiin WordPress-kii ugu dambeeyay ee la sii daayay hadda wuxuu leeyahay muuqaal aad ka sameyn karto bog kasta bogga guriga oo aad ku dhejiso bartaada meel kale. Taasi waxay awood kuu siineysaa inaad u guurto bogaggaaga kale (Su'aalaha Badbaadada La Isweydiiyo, Siyaasadda, iwm.) Waxaad ku leedahay bartaada internetka oo WordPress ayaa wax ka qabanaya. Faa'iidada ayaa ah inaad kuheli karto khariidadaada tooska ah ee goobta lagaa soo saaray! Waxaan runtii kugula talin lahaa inaad sidan sameyso oo aad WordPress-kaaga ku dhejiso saxda cinwaanka boggaaga!
Waad dhaqaajin kartaa bogga adigoon dhibeynin waxyaabaha aad horey u sameysay sidaa darteed wax walwal ah meeshaas kama qabin! Haddii aad tan sameyso, hubi inaad wax ka beddesho faylkaaga robots.txt si aad ugu tilmaamto khariidadda bogga ee galka saxda ah.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad dhexgasho eBay midig WordPress! Tan dhexdeeda maqaal aan helay, goobta ayaa isticmaashay Qalabka Tifatiraha eBay ku darid ah Liistada alaabada saxda ah ee dhinaca garabka WordPress.
Qofna ma jecla inuu talo ka qaato qof aan la aqoon, sax? Waxaan gabi ahaanba sawir dul saari lahaa boggaaga Ku saabsan. Haddii ay tahay mid fiican (kaftan), waxaad xitaa u baahan kartaa inaad ku dhejiso mawduucaaga bog kasta. Ha ka xishoonin kaamirada - dadku waxay runtii ku qanacsan yihiin ogaanshaha barta ay akhrinayaan adoo fiirinaya.
U wareeji quudintaada FeedPress adoo adeegsanaya plugin ka ah 'WordPress Feedburner' si aad u kala garato inta dad ee akhrinaya bartaada adoo adeegsanaya RSS oo ku dheji xiriiriyahaaga RSS oo leh astaan ​​sare oo dhinacaaga ah si ay dadku u helaan. . Feedburner wuxuu leeyahay xulashooyin kale sidoo kale, sida foomka rukunka emailka oo aad ku qori karto bartaada.
Waxaan ku sheegay plugin this on laba kale Talooyin: Si aad u ilaaliso dadka waawayn, waxaan kugula talin lahaa Qoraalada La Xiriira oo tiirarka la xidhiidha hoos dhig mid kasta oo ka mid ah tiirarkaaga. Qaabkan dadweynahu kaa helo adoo adeegsanaya Mashiinka Raadinta ayaa aqrin doona qoraaladaada oo haddii aysan si sax ah u helin waxay u baahan yihiin, waxaa laga yaabaa inay kudhowaadaan maqaalo dheeri ah oo isla mowduuca ku saabsan. Tani waxay sidoo kale kaa caawin doontaa isku xirnaanta qoto dheer Qiimeynta Mashiinka Raadinta.
Sideed ku ogaan kartaa waxa ay dadka ka akhrinayaan bartaada? Ma lihid la'aan xirmo falanqeyn wanaagsan. Waxaan aad ugu talin lahaa Falanqaynta Websaydhka Riix. Haddii aad hesho nooca Pro, waxaad kala soo bixi kartaa boggaga WordPress-ka ah si aad kor ugu kacdo oo aad u shaqeyso!
Wax badan ayaad ku baran doontaa adigoo ogaanaya halka martidaadu ka yimaadaan, waxa ay raadinayaan, iwm.
Waa wax walba oo ku saabsan helid, Tom! Waxaan u baahanahay inaan u sheegno Mashiinnada Raadinta sida lagu helo adiga iyo akhriska iyo qiimeynta mashiinka raadinta ayaa imaan doonta. Waxaad qabataa shaqo weyn oo ah dhajinta sawirrada iyo qorista qoraallo cad oo kooban. Cinwaanadaada boostada waa kuwo aad u fiican… Shaki kuma jiro markaan helno makiinadaha raadinta inay ku helaan, balooggaagu wuxuu bilaabi doonaa inuu fuulo akhriska iyo dukaankaaga eBay ee iibka!
Tags: bloggujiArbacada ahlinkPermalinkqoraallada la xiriiramatoorada searchammaankaWordPress
Jul 9, 2007 markay ahayd 2:37 AM
Qalabka falanqaynta ayaa aad muhiim ugu ah Blog, haddii kale waligaa ma dhaafi doontid waxa ku dhacaya bartaada.
Waxaan haystay baloogyo bilaa falanqeyn ah muddo hal sano ah, illaa iyo haddana waxaan aqriyaa mid ka mid ah qoraallada lagu daabaco barta sidan oo kale ah. Waxaan isticmaalay Clicky waagii hore, si kastaba ha noqotee, sida ugu fiican ee aan dhihi lahaa ayaa ah GoStats.com , waxay leeyihiin nidaam canaan oo dhammaystiran.